सिन्धुपाल्चोक पहिरो अपडेटः १३ जनाको शव भेटियो, १८ अझै बेपत्ता ! « MNTVONLINE.COM
सिन्धुपाल्चोक पहिरो अपडेटः १३ जनाको शव भेटियो, १८ अझै बेपत्ता !
सिन्धुपाल्चोक । भीरखर्क र घुम्थाङको नागपुजेमा आइतबार बिहान २ बजे भीषण पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको छ । पहिरोमा परी १८ जना अझै बेपत्ता छन् । आज (सोमबार) बिहान पहिरो गएको स्थानबाट २ वटा शब निकालिएको छ ।
बाह्रबिसे नगरपालिका–७ को भीरखर्क भन्ने स्थानबाट आएको पहिरोले भीरखर्क र घुम्थाङको नागपुजेको बस्ती बगाएको थियो । पहिरोले बाह्रबिसे नगरपालिका ७ को भिरखर्कका १० र नागपुजे गाउँका ८ घर पुरिएका छन् । हराएकाको खोजीमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासी लागिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।